Rallye du Boeny: norombahin’i Tahina sy i Baovola ny fandresena | NewsMada
Rallye du Boeny: norombahin’i Tahina sy i Baovola ny fandresena
Tontosa ny asabotsy lasa teo, tany Mahajanga ny dingana fahefatra amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, eo amin’ny famoriana fiarakodia «rallye du Boeny 2018». Voalohany, i Tahina sy i Baovola.
Lasan’ny ekipazy, Tahina sy i Baovola, nitondra ny fiara Subaru N4, ny fandresena teo amin’ny «rallye du Boeny», nokarakarain’ny klioba TFM Rallye. Dingana fahefatra amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, notanterahina tany Mahajanga, ny 23 ka hatramin’ny 25 aogositra, ho avy izao.
Tontosany tao anatin’ny 1 ora 43 mn 38 s ny fifaninanana, tamin’ity. Marihina fa teo amin’ny andro farany vao tafavoaka ho mpandresy izy ireo, raha voatery niala ny ekipazy Olivier sy i Maya, izay nitarika hatrany ,saingy tojo olana ara-mekanika. Na izany aza, mbola nifampitadiavana ireo dingana manokana roa farany “ES 11” sy ny “ES 12”. Lasan’i Teddy sy i Herman, mantsy ny “ES 11”, saingy tsy namelan’i Tahina sy i Baovola kosa raha tsy azony, ny “ES 12”, izay nanamafisany ny fandresena.
Nanaraka tao anatin’ireo telo voalohany hatrany kosa i Mathieu (Zaza maditra). Niezaka ihany ny tovolahy ny haka fandresena tamin’ity, saingy tsy tafavoaka . Na izany aza, mbola noporofoiny fa manana ny toerany izy, eto Madagasikara, eo amin’ny fifaninanana mamily fiarakodia.
Marihina fa somary nampanano-sarotra ireo mpifaninana, ny lalana nodiavina tamin’ity “rallye du Boeny”, ity. Betsaka ireo noheverina ho andrarezina, saingy tsy nahavita ny fifaninanana. Tsy nahitana fampisehoana tsara loatra araka izany ny hazakazaka teo amin’ireo mpifaninana.
Tsiahivina fa fiara 11, tamin’ireo 30 nandray ny fiaingana, tamin’ity “rallye du Boeny”, ity no tonga hatramin’ny farany.
Fihaonana manaraka, ho an’ny mpanamory fiarakodia, ny “rallye international de Madagascar”, tafiditra amin’ny dingana fahadimy eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, hotontosaina ny 21 ka hatramin’ny 23 septambra, ho avy izao.
Ny filaharan’ireo ekipa 5 voalohany :
Tahina – Baovola – (Subaru) – N4 – (01 ora 43 mn 38 s)
2. Tanjona – Patblock – (Subaru) – M12 – (01 ora 44 mn 59 s)
3. Mathieu – Tsiresy – (Nissan) – (01 ora 45 mn 51 s)
4. Teddy – Herman – (Ford Ranger) – (01 ora 46 mn 47 s)
5. Kamikaz – Najo – (Subaru) – M12 – (01 ora 57 mn 31 s)